ရန်လိုကျွဲ – မြန်မာပြည် ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျခြင်း (သရော်စာ) | MoeMaKa Burmese News & Media
သားကြီးမောင်ဇေယျ - ပူစပ်စပ် ညနေ
● ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျတဲ့ မြန်မာပြည်
အငြိမ်းစား ချိုကုပ်ဒူးကြီးသည် ဒုက္ခသီရိနေပြည်တော်တွင် စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ယခင့်ယခင်ကာလ သတင်းတို့က ဆိုသည်။ သို့သော်… ယနေ့ အချိန်တွင်မူ ထိုသို့ မဟုတ်မူကြောင်း သူ၏လက်ထောက်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူများက မီဒီယာတွင် အခိုင်အမာ ပြောဆိုနေကြသည်။
အငြိမ်းစားလျှက်ရှိသော်လည်း တိုင်းရေးပြည်ရာများကို စောင့်ကြည့်ပြီး စိုးရိမ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ရတက်မအေးဖွယ် ပြည်ရေး ပြည်ရာကြောင့် စာဖတ်ပျက်နေကြောင်း စသဖြင့် စသဖြင့် အတည်ပေါက် ပြောဆိုကုန်ကြလေ၏။
အနှီ အားကိုးရသူ လက်ထောက်ကြီးတို့၏ ပြောဆိုချက် မည်မျှမှန်ကန်သည်ကိုသိရှိနိုင်ရန် ချိုကုပ်ဒူးကြီးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှဖြစ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးသကာလ နေသာလေသာသောတစ်နေ့တွင် သတင်းထောက် ရန်လိုကျွဲ ဒုက္ခသီရိနေပြည်တော်သို့ ရောက်ပြန်လေသည်။
ချိုကုပ်ဒူးကြီး၏ ခမ်းနားလှစွာသောနန်းတော်ရှိ ဧည့်ခန်းဆောင်သို့ သတင်းထောက် ရန်လိုကျွဲ ရောက်သွား၏။ ကျန်းမာ ပကတိ အလွန်ချမ်းသာစွာရှိနေသော ချိုကုပ်ဒူးကြီးက နွေးထွေးစွာ ဆီးကြို၏။
ချိုကုပ်ဒူးကြီး ။ ။ ဟေ့ကောင်လေး၊ လာခဲ့ လာခဲ့၊ မင်း … ရာထူးမတက်သေးဘူးလား။
ရန်လိုကျွဲ ။ ။ ရာထူးက အရေးမကြီးဘူး အဘရေ၊ လခတိုးဖို့နဲ့ စာမူခ စို့စို့ပို့ပို့ ရဖို့သာ အရေးကြီးတာပါ။
ဒူးကြီး ။ ။ ဒါဆိုလည်း ငါ့ကို အင်တာဗျူးပြီး မင်းတို့သတင်းစာထဲထည့်ကွာ။ အဲဒါဆို မင်းတို့သတင်းစာလည်း အရောင်းသွက်၊
မင်းလည်း စာမူခတွေဘာတွေ ရမှာပေါ့ကွာ။ ကဲ… ဆိုစမ်း … မင်းရဲ့လာရင်းကိစ္စ။
ကျွဲ ။ ။ ဒီလိုပါ…၊ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီး အဘစိုးရိမ်နေတယ်လို့ သိရတယ်။
ဒူးကြီး ။ ။ မင်းကို ဘယ်သူပြောသလဲ။
ကျွဲ ။ ။ ဂျာနယ်တွေထဲ အဲဒီလို ရေးထားကြတာပဲ။ ပြီးတော့ ပြည်ရေးပြည်ရာက ရတက်မအေးဖွယ်ဖြစ်နေတာကြောင့် အဘ စာဖတ်ပျက်နေတယ်လို့လည်း …
ရှင်းပြနေဆဲတွင်ပင် ချိုကုပ်ဒူးကြီးက ဟက်ဟက်ပက်ပက် အော်ရယ်လိုက်သဖြင့် ရန်လိုကျွဲ၏ စကားတပိုင်းတစနှင့် ရပ်သွား ၏။
ဒူးကြီး ။ ။ အဟိ… သူတို့က ဘယ်သူ့ ကိုးကားပြီး လျှောက်ရေးနေကြတာလဲ။
ကျွဲ ။ ။ အဘရဲ့ ညာလက်ရုံးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ပြောပြတာကို ပြန်ရေးထားကြတာပဲခင်ဗျ။ အဘ အငြိမ်းစားယူ သွားသော်လည်း သံယောဇဉ်တွေမဖြတ်နိုင်ဘူး၊ မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုတော့ ဘယ်လိုကိုင်တော့မယ်၊ ဘယ်သူဆိုရင် နာတော့မယ် … မီဒီယာမှာပြောထားတာတော့ စုံနေတာပါပဲ။
ဒူးကြီး ။ ။ ဟာ ဟ… အဲဒီတော့ မင်းကရော ဘယ်လိုထင်လဲ သူတို့ပြောတာကို။
ကျွဲ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ… အဘ စိတ်ပူနေတယ်ဆိုတာ တကယ်ပဲလား၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဘာကို ဘယ်လောက်အထိ စိတ်ပူတာလဲ။
ဒူးကြီး ။ ။ ဟားဟားဟား… ရယ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော၊ ရင်ဘတ်နောက်ကကျောလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပကွာ ဟား ဟားဟား…။
ကျွဲ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့… ရယ်တာလည်း ရယ်ပေါ့ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော် မေးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်း ဖြေပါဦး၊ ဒုက္ခသီရိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်ပြီးတိုင်းရေးပြည်ရေး စိတ်မအေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်အကြောင်းအရာကို ဆိုလိုတာလဲခင်ဗျ။
ချိုကုပ်ဒူးကြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက် အော်ရယ်ပြန်၏။ အတန်ကြာမှ ရယ်မောခြင်းကို ဘရိတ်အုပ်ကာ သတင်းထောက်ကို သနားသောအကြည့်ဖြင့် ကြည့်ပြီး ဖြေ၏။
ဒူးကြီး ။ ။ သြော်… ရန်လိုကျွဲ၊ ရန်လိုကျွဲ …. မင်းကဟုတ်မလိုလိုနဲ့ အတော်လေး စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု လိုသေးတဲ့ ကောင်လေးပဲ၊ ဒါကြောင့် သတင်းထောက်ဘ၀ကနေ ရာထူးမတက်တာပေါ့ကွ။ ဒီမယ် … ငါ ပြောမယ်၊ ငါဘာမှ စိတ်မပူဘူး၊ စိတ်ပူစရာ အကြောင်း ငါ့မှာ ဘာမှမရှိဘူး။ ဟုတ်ပြီလား။
ကျွဲ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ…။ စိတ်မပူဘူးဆိုပေမယ့် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ အထူးသဖြင့် ဒုက္ခသီရိအခင်းအကျင်းက စိုးရိမ် စရာအခြေအနေ မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျ။
ဒူးကြီး ။ ။ (မျက်လုံးအစုံ မှေး၊ ခေါင်းတယမ်းယမ်းအမူအယာဖြင့်) နိုး…နိုး… နိုး… ဒီမယ် … ဒီမယ် ငါ ထပ်ပြောမယ်ငကျွဲ… ငါ့မှာစိုးရိမ်တာတွေ မရှိတော့ဘူး၊ စိတ်ပူတာတွေလည်း လုံး…..ဝ မရှိတော့ဘူး။ ငါ့ကောင်တွေကို အရပ်ဝတ်လဲပေးပြီး အာဏာလွဲပေးလိုက်တယ်။ ပုံပြောင်းလိုက်တယ်။ အပ်ချလောင်း ဆိုပြီး ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ စည်းကမ်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီ ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ အဲ…ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်လေး ဘာလေး ပြောနေတဲ့ မင်းတို့လည်း “ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျ” ဆိုသလို အဆင်ပြေနေကြပြီ ဆိုတော့ ငါက ဘာကိုစိုးရိမ်ရမှာလဲကွ။
ကျွဲ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ… အဘ စိတ်မပူဘူး၊ မစိုးရိမ်ဘူး ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျ ဆိုတာကဘာလဲဗျ။
ဒူးကြီး ။ ။ သြော်… ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေထဲမှာ မင်းမပါဘူးလား။
ကျွဲ ။ ။ ပါတယ်လေဗျာ။ ဒီမိုကရေစီရှိရမယ်လေဗျာ။ ဒါမှ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖော်ပြခွင့် ….
ရန်လိုကျွဲ၏စကားမဆုံးခင် ချိုကုပ်ဒူးကြီးက ဖြတ်ပြော၏။
ဒူးကြီး ။ ။ အေး..အဲဒီ ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေက ရေတွင်းကြီးပဲကွ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အဲဒီတွင်းထဲမှာ ရှိတယ်။
ကျွဲ ။ ။ ပေါက်ကရတွေဗျာ…အဲဒီအခြေခံဥပဒေဆိုတာ ပြင်လို့မရအောင် အကွက်ချစီမံထားတာမဟုတ်ဘူးလား။
ဒူးကြီး ။ ။ သိပ်……………….သေချာတာပေါ့။ အခုမင်းတို့အားလုံး ရေတွင်းထဲ ကျနေပြီ။ ငါ …. ထပ်ပြောပြမယ်…အဲဒီ ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေက ရေတွင်းကြီးပဲကွ။ မင်းတို့ ရေတွင်းထဲ ကျနေပြီ။
ကျွဲ ။ ။ ခင်ဗျာ… ကျွန်တော်တို့ ရေတွင်းထဲ ကျနေပြီ … ဟုတ်လား။
ဒူးကြီး ။ ။ ဟုတ်တယ်၊ ကျနေပြီ၊ မင်းတို့တွေ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျကြတာပဲ။
ကျွဲ ။ ။ ဘယ်လိုလဲဗျာ… ကျွန်တော်တော့ နားမလည်တော့ဘူး။
ဒူးကြီး ။ ။ ဒီလိုလေကွာ…ရေငတ်ချိန်မှာ ရေတွင်းထဲကျတယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာစရာ မကောင်းဘူးလား။
ကျွဲ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့…သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ ရေငတ်ပြေပြီပေါ့။
ဒူးကြီး။ ။ အင်း….မင်းတို့က ရေသောက်ချင်တာပဲသိတာကိုးကွ။ ရေတွင်းဆိုတာက ရေရှိချင်မှလည်း ရှိမယ်။ ရေမရှိဘူး ဆိုရင်လည်း အဲဒီ ရေမရှိတဲ့တွင်းထဲ နှာခေါင်းဖော်ပြီး သေပေတော့။ အဲ…တွင်းထဲ ရေရှိတယ် ဆိုရင်လည်း အဲဒီတွင်းထဲမှာပဲ ရေနစ်ပြီး နေပေတော့…ဟားဟားဟား…။
ချိုကုပ်ဒူးကြီး၏ အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်ကို နားထောင်အပြီး မြန်မာပြည် ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျရခြင်းအကြောင်းရင်းကို သဘောပေါက်မိလေသည်။ ထို့ပြင်တဝ … တိုင်းရေးပြည်ရာများကို ချိုကုပ်ဒူးကြီး စောင့်ကြည့်ပြီး စိုးရိမ်စရာမလိုသည့် အကြောင်းရင်းကိုလည်း သတင်းထောက် ရန်လိုကျွဲ သဘောပေါက်သွားလေတော့သည်။
(ရန်လိုကျွဲသည် မိုးမခမီဒီယာအွန်လိုင်းစာမျက်နှာ www.moemaka.com တွင် သရော်စာ များ ရေးသားနေသူတစ်ဦးဖြစ်သည်)
ရန်လိုကျွဲ ● ဂြိုဟ်သားနှင့် စကားပြောခြင်း (သရော်စာ) (0)
ရန်လိုကျွဲ ● ပေါ်ပြူလာခေါင်းဆောင် ပါတီပြောင်းခြင်း (သရော်စာ) (0)
ရန်လိုကျွဲ ● ငွေစက္ကူမှာ ဘာပုံထည့်ရင် သင့်တော်မလဲ (0)
ရန်လိုကျွဲ ● အာလာဒင် မီးခွက်စောင့်နတ်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ (0)
ရန်လိုကျွဲ ● သတင်းသမားဘဝမှ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝသို့ …. (0)